Faallo: Ujeeddooyinka Qaraxyadda -Al Shabaab! | Radio Borama
You are here : Radio Borama » Fadhiga Raadiyowga » Faallo: Ujeeddooyinka Qaraxyadda -Al Shabaab!
Faallo: Ujeeddooyinka Qaraxyadda -Al Shabaab!
Posted by admin on March 26th, 2019 12:38 PM | Fadhiga Raadiyowga
QARAX waa dagaalka ugu adag ee la isku soo qaado. Waa dagaalka ay adagtahay in la iska difaaco. Waa dagaalka dadka tabarta-daran ay ku dagaalamaan, haddana ka dhiga kuwo ugu xoogga badan!!!. Waa Argagax, anfariir, Cabsi,iyo uur ku taalla aad u xanuun badan.
Ma ahan wax fudud in QARAX ay qolo abaabusho, haddana uu dhaco oo uu sidi loogu tala galay u fulo. Qaraxa wuxu u baahan yahay:- – Qarash ama lacag inta ay dadka sawiranayaan ka badan… Qalabka samayntiisa, gaariga, hubka, iyo iibinta agabki kale ee ay u baahnayd howsha.
Waxa kale oo qarashka ka mid ah diyaarinta wadooyinka loo mari lahaa fulinti qaraxa… Siyaasiyiin, aqoon-yahano, ganacsato iyo noocyada kala duwan ee bulshada ayaa lacagtaasi qeyb ka helaya, si ay u fududeeyaan gaarsiinta qaraxa goobti loogu tala galay, iyo helida xogta Goobta.
Intaasi iyo in kale oo adag ayaa loo maraa qaraxa.
Haddaba QARAXA waa laba nooc:-
Mid waa miino dhulka lagu aasay, ama Gaari lagu dhajiyey. Ama waa bambo gacmeed ama hoobiye meel lagu tuuray. Kan kagama hadlayno maqaalkan.
Kan labaad waxa la yiraahdaa INQIMAASIYO ama waa Gaari walxaha qarxa ay ka buuxaan oo uu qof wado, ayna wehliyaan ciidan kale oo hubaysan.
Waa maxay ujeedka iyo hadafka ay ka leeyihiin qaraxa noocan ah.
Inkasta oo uu yahay khalkhal dhanka amniga ah. Inkasta oo uu yahay burbur dhaqaale iyo baaba’ nafeed. Inkasta oo uu yahay fashil iyo dabacsanan amni. Haddana hadafka ugu weyn ee qaraxyada noocaas ah laga leeyahy ayaa ah mid SIYAAASI AH, kaas oo laba dhinacle noqda mararka qaar:-
Marka koobaade, Marka kooxda dhexdeeda uu khilaaf ka dhaco, Dad la laayo, kuwo kale la xirxiro ama culeys amni, siyaasi ama dhaqaale ah la dareemo; xalku waa Qaraxyada noocaan ah in ay la abaabulo,si Ra’yul Caamka ay ugu jeestaan saamaynta uu yeeshay qaraxa iyo hadal-hayntiisa ,loogana mashquulo dhibtii taagnayd.
Taa Waxaad ku garanaysaa Qaraxa oo aan koontaroolnayn kuna wajahnayn badanaa dadki ay ayaga Cadowga u arkayeen ama ay beegsanayeen.
Dowladda iyo Shicibkana aysan u kala ahayn oo ay tahay un mar ha dhaco meeshuu doono haku dhacee.
Mida kale ee ugu weyn waa in khilaaf Siyaasadeed laga dhex abuuro DOWLADDA , Shacabka lagu kiciyo, Siyaasiyiinta caroodaan, Dal iyo Dibadna laga qeyliyo… kadib Xaalka uu sidaan noqdo:….Saraakiisha ayaa la eryaa, Askarta ayaa la badalayaa, Waziirada ayaa gacan ku gabad noqonaya, kuwa ka sareeya ayaa harsiga loo diidayaa, Mucaaradki ayaa Nafta iska qaadaya ku Digashada Madaxdana bilaabaya, Shacabki ayaa waalanaya…
daganaanshihi oo idil ayaa lumaya, Hamigii iyo hankii madaxda ayaa jabaya, howlihii socday oo dhan ayaa hakad galaya,kii xilka waayey mucaarad buu noqonaya kii ku harayna Calool xumuu la jiifayaa… Mid Cusub oo dhanka laga jiro aan garanayna wuu imaanayaa…Saxaafaddi ayaa afka furanaysa oo waxa ayba baahinayaan xog xataa aysan heli karin kuwii qaraxa geystay, oo ku saabsan goobtii ay wax ka dheceen… halkaas marka ay mareyso, Walaahowga iyo isku dhex-yaacana uu heerki ugu sareeyey gaarey; ayey kooxdu shaqa kale qabanaysaa; Ciidan cusub ayaa la soo galinayaa magaalada, hub iyo qalab cusub ayaa la soo dhoobayaa, dadka qaar ayaa loo hanjabayaa lacagana laga qaadanayaaa.
Dowladdii iyo hay’adihii amniga marka ay soo miyirsanayaanba QARIXII labaad magaalada waaba ku diyaarsan- yahay oo fulin unbuu sugayaa!!!
Aan kusoo koobo labada ujeeddo ee aan soo xusay ee ay kooxda Alshabab wax u qarxiyaane… kan koobaad waxa lagu dajiyaa Siyaasada gudaha ee kooxda… marka uu QARAXA dhaco; Mucaarad Muxaafad iyo xataa shacabkii deegaanadooda ku noolaa way is wada raacayaan,una wada riyaaqayaan – nin walba seey doonto haka ahaatee-.
Halka hadafka kale uu yahay, Kicinta siyaasadda DOWLADDA iyo abuuridda xasilooni darro siyaasadeed, taasoo keenta in dadku wada qeyliyo nin walbana dhan u boodo, eed iyo kala cararna bilowdo, laguna sugo qaraxa xiga.
Waa jirtaa in Madaxdeenu ay dhamaan shacab yihiin, Xataa kuwa Amniga iyo Ciidanka qaabilsan. Ay sheegaan tirada Ciidanka, tayadiisa,Goobta ay weerarka ku yihiin, iyo xataa waqtigay weerarayaanba… intaasoo dhanna waa ka mamnuuc howlaha ciidanka gaar ahaan marka lagu jiro Dagaalka Gorilaha.
Dhanka kalana ay dhammaan xubnaha Kooxdu ay wada Ciidan yihiin una diyaarsan -yihiin dagaal weerar iyo difaac isugu jira.
Waa jirtaa in Shacabka ree Muqdisho qaar kamid ah ay yihiin dadka ugu taageerada badan kooxaha Islaamiyiinta ah.
Waa jirtaa inay muqdisho tahay halka kaliya ee uu nin walba (Shabab ah) hanti iyo ganacsi ku leeyahay.
Haddana ayadoo ay saas tahay Amniga wax waa laga qaban karaa haddii la maro Qawaacida Sugidda Amniga Magaalooyinka.
Haddaad dhimato geeridu marbay nolosha dhaantaaye.
Dhaqashiyo mar bay kaa yihiin dhereggu xaaraane.
Nin dharbaaxo quudheed dugsaday dhaqayaded maalye .
Qorre: Shaqsi Amniga Dalka u naxaaya oo bartey Culuumta Amniga..
« Qarax xoogan oo ka dhacay isgoyska Talaax ee magaalada Muqdisho iyo khasaare dhaawac iyo dhimasho ka dhashay
Daawo” Waa In La Anshax Mariyaa Cida Khaladay Astaanta Qaranka..” Ku Xigeenka Garyaqaanka Guud »